Saan-tuur La-Tuuri Karo, Feer Laba-geesood ah, 3 Feedh Mashiinka La-Tuuri Karo - Jiali
1 Bisha Ragga
2 Bisha Ragga
3 Bisha Ragga
4 Bisha Ragga
5 Bisha Ragga
6 Bladood Ragga
1 Blad Haweenka
2 daab Haweenka
3 Bladood Haweenka
4 Bladood Haweenka
5 Bladood Haweenka
BUQA EDGE BADBAADO
Oo ay ku jiraan mandiillo ka soo baxa hal daab illaa lix daab oo labadaba loo heli karo kuwa la tuuri karo iyo mandiil nidaamka.
Baarka qoyaanka ee ballaaran waxaa ku jira Faytamiin E iyo Aloe Vera. Muddo dheer iyo gacmo qaro weyn ayaa siiya xakameyn iyo raaxo fiican.
Lagu soo saaray jawi nadaafadeed. Shanlo qaas ah oo loogu talagalay in si fudud looga saaro timaha. Dhammaan mandiilleydu waa shahaado FDA.
Laga sameeyay Sweden Tiknoolajiyada shiidan ee Yurub iyo tiknoolajiyada ayaa dammaanad qaadaya fiiqnaanta iyo raaxada.
Madaxa Dhaqaajin kara Ragga la tuuro La rogrogi karo ...
Jilicsan gacanta seddex daab daab design nin di ...
Super Premium Dhaqan La tuuro Shan Furan Ba ​​...
Lix Nidaam Open Open Blade Blade Mens system Razor Sha ...
Ammaanka tayo sare leh ahama saddexgees bir ...
Dhaqdhaqaaq dheer oo dhaqaale oo la tuuri karo Triple Blade Wo ...
Daryeelka Shakhsi ahaanta ee ahama Haweenka Birta ah ...
Mashiinka cabirka yar ee sanduuqa balaastigga u fiican ee ...
Qaran aan u Dhoofino
Sanadkii Jiali oo la Aasaasay
Mugga Iibka Waxyaabaha
Sidee waxqabadka tayada mandiilku yahay?
Ningbo Jiali waa soo saar mandiil xirfadeed leh 25 sano taariikh. Dhamaan qalabka daabka iyo teknolojiyada waxay ka yimaadeen Yurub. Xiirayaashayadu waxay bixiyaan khibrad xiirashada oo heer sare ah.
Macaamiisha had iyo jeer wax badan ayey ku bixiyaan magaca calaamadda halkii ay ka shaqeyn lahaayeen mandiil. Xiirashadayada xiirto iyo sidoo kale kuwa calaamadeysan laakiin leh qiimo aad uga yar. Waa xulasho fiican adiga.
Waxaan haynaa shuruudaha ugu yar ee amarrada badankood laakiin sidoo kale waxaan tixgelin doonnaa xaaladdaada gaarka ah ee suuqa inay tahay mid taageero leh. Gargaarka is-kaashatada had iyo jeer waa mudnaanta.
Fadlan ka tag fariimaha waxaanan kula soo xiriiri doonnaa 24 saac gudahood.
Nofeembar 13, 2020
Talooyin xiirista dumarka
Markaad xiirto lugaha, hoosta hoose ama aagga bikininka, qoyaanka habboon waa tallaabada ugu horreysa ee muhiimka ah. Weligaa ha xiirin adiga oo aan marka hore biyo ku qoynin timaha qalalan, maadaama timaha qallalan ay adag tahay in la gooyo oo la jebiyo geeska wanaagsan ee mandiilka. Mindhicil fiiqan ayaa muhiim u ah helitaanka u dhow, raaxo leh, xanaaqa -...
Haddii aad u maleyneyso in halganka ragga ee ah inay ka saaraan timaha wajiga ay tahay mid casri ah, waxaan idiin heynaa war. Waxaa jira cadeymo qadiim ah oo sheegaya in, xilligii Dhagaxa Dhamaadka, ragga loo xiiray dhagax dixeed, obsidian, ama sharmshell shards, ama xitaa loo adeegsaday xirmooyin sida tweezers. (Ouch.) Mar dambe, rag ayaa tijaabiyay naxaas, booli ...
Shan tallaabo oo xiirashada weyn
Si aad ugu dhawaato, xiirto raaxo leh, kaliya raac dhawr talaabo oo muhiim ah. Tilaabada 1: Ku dhaq saabuun diirran iyo biyo ayaa saliida ka saari doona timahaaga iyo maqaarkaaga, waxayna bilaabi doonaan habsami u yeelista hawraarista (si ka fiican weli, xiir qubayska kadib, markay timahaagu si buuxda u dheregsan yihiin). Tallaabada 2: Jilci timaha wajiga waa qaar ka mid ah ...
Maya 77 Wadada ChangYang, Degmada JiangBei, Ningbo, Shiinaha